I-China i-knotwear entle kunye ne-knit efanelekileyo yabasetyhini mveliso kunye nabenzi | WG
Zintle kwaye zintle iimpahla zokunxiba zabafazi
Ijezi emnandi edityanisiweyo eneenkcukacha ezimfakamfele kwimikhono
Ijezi emnandi edityanisiweyo eneenkcukacha ezimfakamfele kwimikhono. Ngaphezulu kancinci. Iinkcukacha ezifakiweyo zigubungela ubude obugcweleyo nawo onke amacala ezandla. Imibala inamandla kwaye iyaphuma ingwevu. Uziva kumgangatho ophezulu kakhulu.
Uhlobo: Amagxalaba awileyo, umkhono omde onezimfakamfele, imikhono ejijelweyo, kunye neembambo ezijikeleze intamo, ii-cuffs kunye nomphetho, ukubethelela ngaphambili
Isixhobo: uthambile, umdibaniso ocolekileyo womqhaphu
Iimpawu: ezimfakamfele, umsebenzi olungileyo, caba ngaphambili
Abafazi beVintage Crochet Knit Pullover Beading Hollow Out Sweater Cover Up
* Ukwakhiwa: 100% Umqhaphu
* Imikhono emifutshane yekepusi, scoop V intamo
* I-Boho crochet iintyatyambo ezinithiweyo zinxibe iingubo zangaphantsi kunye nokuhonjiswa kwamaso
* Khuphela igxalaba elingenamikhono impahla yokunxiba yokunxiba isuti, yokuqubha
* Izilayidi ezintle, ezifanelekileyo ukuhambelana neekisoles, iilokhwe ezingenamikhono, ilokhwe yangokuhlwa, iibhulukhwe ezimfutshane okanye izikethi, njl.
* Ubungakanani obuBunye buhambelana ne-US SIZE 0-6 ecetyiswayo
Uhlobo lohlobo: Plain
Iinkcukacha: neeperile, ngamaso
Uhlobo lweFit: Ukulingana rhoqo
Ikhonkco: Umjikelo ojikelezayo
Ubude beSleeve: Umkhono omde
Uhlobo lweSleeve: Yehla ihlombe
Ixesha lonyaka: Intwasahlobo / ukuwa
Ukwakhiwa: iipesenti ezingama-63 zePolyester, i-37% yeCotton
Ijezi yabafazi iJacquard eneqhosha
Ukwakhiwa: 45% iPolyester 30% Uboya 20% i-Acrylic 5% Inayiloni
Wamkelekile kwiwebhusayithi yethu yejacquard sweta.
Yintoni ijezi ejacquard?
Ngelixa ipateni ye-jacquard inokwenziwa kulo naluphi na uhlobo lwentambo, i-jacquard knit ibhekisa ngokukodwa kwipateni ye-jacquard eyenziwe kumatshini wokunitha. Indwangu edibeneyo yeJacquard ilungele iijezi, yenza iimpahla ezintle kunye nesitayile esahlukileyo nesingapheliyo.
Ekwindla kunye nasebusika knitted inoveli pullover umbala oqinileyo ikhola ejikelezayo-2019
Inkqubo: 7GG Plain
Amanqaku: Ukuzonwabisa, ukuCoca (ukuCoca), ukugcina ukufudumala
Ekwindla nasebusika ladies ijezi ezinithiweyo ezimfakamfele
Inkqubo: 12GG Plain
Ekwindla nasebusika ijezi ebukeleyo kwisitayile sikaChanel
Intwasahlobo yamaLadies ayinithiweyo ngekhathuni
Inkqubo: I-12GG Plain processing knit
Iimpawu: Printing, ezithandekayo, Leisure
Amadoda ehlotyeni i-T-shirt enxibe ikhola engqukuva enodoli oprintiweyo
Uhlobo: IsiKorea esiqhelekileyo
Isixhobo: 100% yekotoni
Ubukhulu: S, M, L, XL, XXL
Isuti yeLadies's cashmere yejezi elinamakhonkco adibeneyo
Uhlobo: Ijezi eboshwe ngekhola ejikelezayo - iisuti ezimbini zabafazi
Inkqubo: I-7GG yemibala emininzi yeefolokhwe kunye ne-corrugated strip
Iimpawu: Ilungile, iRetro
I-sweatshi ye-Ladies 'cashmere enithiweyo
Uhlobo: ijezi evulekileyo yabasetyhini
Inkqubo: I-7 GG yemibala emininzi yemibala
Phawu: Ukhululekile kwaye ukhululekile, uhambelana nefashoni
I-Ladies 'cashmere knitted pullover nge-hoodie kunye ne-woolen draw-string
Uhlobo: Ijezi yabasetyhini eyelukiweyo enomnqwazi / hoodie, ubungakanani obufutshane
Inkqubo: I-7GG yemibala emininzi yemibala
Iimpawu: Ikhululekile kwaye ikhululekile, inomdla, ifihliwe
Fumanisa ingqokelela yethu entsha yabasetyhini beekhadigans kunye nokuxhuma. Bespeak kuluhlu lwethu lokuxhuma kwabasetyhini kunye neentloko, kubandakanya iminqwazi yabasetyhini, izikhafu kunye neiglavu.
Isitayile sabasetyhini esinotyiweyo kwiFashoni yeKrisimesi
Uhlobo: Ijezi yasentanyeni yabasetyhini ebhinqileyo
Inkqubo: 7GG imibala emininzi yejacquard
Iimpawu: Ikhululekile, ifashini, inemilinganiselo emithathu
Khetha i-WG, unokufumana nawuphi na umbala weklasikhi obalaseleyo kwizikratshi ze-cashmere, izinto ezimnandi zeKrisimesi zokuxhuma kwii-chic cardigans. Yenza izitayile zakho ngokwezifiso, kwaye uya kukuxabisa iminyaka ezayo.
Uluhlu olubanzi lwezinto zokunxiba ze-WG lubandakanya ii-cardigans, ii-jumpers kunye neejuzi, kubandakanya i-V necks, ikhola yenotshi, ii-knits zentambo kunye ne-Christmas jumpers, ezivela kwiimveliso ezithandwayo ezinje nge-jumpers okanye i-pullover enxibe isithixo sakho.
Umqhaphu okanye uboya, okanye umxube wekhadi. Ijezi ye-V-neck e-cotton, isilika kunye ne-cashmere. Umahluko wempahla yelaphu. Umqhaphu wentambo ebotshwe ngentambo.
Isuti yeLady's knits yesuti entanyeni yofudo, umtya wembambo
Uhlobo: Ijeyiti enxitywe ngesitayile sentamo yofudo kubafazi
Inkqubo: 12GG 2 × 1 ubambo
Izinto eziphathekayo: uboya obucocekileyo / uboya
Phawu: Firm kulungiswe, ezinamagama, phambili
Amabhulukhwe / ibhlukhwe yoboya obudibeneyo yamanina ngentambo yokuzoba / ngentambo
Uhlobo: Iibhulukhwe zamanenekazi ezinithiweyo ijezi
Inkqubo: 12GG inaliti epheleleyo
Izinto eziphathekayo: i-fine-strand / ply cashmere
Phawu: Smooth, elastic, straight & wide
Isiketi sabasetyhini esinotyiweyo esinemikhono egxalabeni
Uhlobo: Isiketi esiqhelekileyo kunye nemixwayo yamagxa kubafazi
Inkqubo: 14GG inemibala emininzi yenaliti epheleleyo
Phawu: ulungile-slim, isitayile saseKorea
I-Cardigan edibeneyo yeLadies entanyeni yofudo enamaqhosha
Uhlobo: I-Ladies 'knitted cardigan evulekileyo entanyeni yofudo enamaqhosha
Inkqubo: I-5GG eqinileyo (3-dimensional) ukunitha
Isixhobo: Umxube woboya obukhukhulayo
Phawu: Ifashoni, ukucokisa, okhethekileyo
I-WG inikezelwe kwabo banomdla ngentambo esemgangathweni kunye nemibala eqaqambileyo, iimpahla ezintle ezenziwe ngezandla, kunye nobugcisa befayibha. Khuthazwa yinkqubo yonke: ukusuka ekucheba uboya, ukudala imibala edaywe ngesandla eqaqambileyo nenamandla, ukuyila iipateni ezintsha, kwaye ekugqibeleni ekufundeni okanye ekuphuculeni izakhono zakho njengezinto ezinithiweyo.
Khetha i-WG, sinika ithuba elihle lokwazana kunye nokuqonda ngokupheleleyo iimpembelelo ezinokubakho ukuphucula ishishini lakho kunye nokukunceda ukhule.
Fumanisa kwaye uthenge ingqokelela yefashoni yamvanje yempahla yamadoda kunye nokunxiba kwabasetyhini, kubandakanya ikhesmere efikelelekayo, iimpahla zokunxiba ezinqabileyo kunye nokubukeka kwikhathalogu.
Sinokukunceda ngokwenza uyilo ingqokelela ehambelanayo ehambelana nobuhle bakho. Singazenza iimpahla zokunxiba ezizodwa ukuba ziyafuneka okanye lonke ingqokelela yamaxesha onyaka kubandakanya nesicwangciso sohlu.
Zonke uyilo zibandakanya iiphalethi zombala, iingcebiso ngamalaphu, kunye nokuprinta / ukuphefumlelwa kwipateni.
Ndinike umfanekiso, unokuba nesitayile esithandwayo! I-WG igxile kwii-odolo zokuthenga zokwenza iisampulu ngokusekwe kwimifanekiso, kwibhetshi encinci nakwizikudusi ezikumgangatho ophezulu.
Sinabaqulunqi beepateni ezingama-20, abathe baveza okanye babonisa iitalente zabo ezibalaseleyo ze-ODM sweatshi ezinithiweyo. Ngobuchule boqhakamshelwano, umbono onobunkunkqele ukuze ulingane iimpahla zakho ezinithiweyo, ngenxa yoko siyazingca ngegama labayili njengabahendi babathengi bethu.
WG: Umzi mveliso. Izixhobo zaseJamani zokwenza umatshini wekhompyuter we-Stol kunye nabasebenzi abanezakhono ezizinzileyo phantse kubantu abali-100 kwimveliso, i-1.5GG ubukhulu, i-16GG ibhityile inokufumaneka, ukuphuma kwenyanga kungafikelelwa kwiziqwenga ezili-100,000. MOQ: qala ngesiqwenga esinye ngombala ngamnye; iisampulu iintsuku ezingama-2-3 zokusebenza; ukuhanjiswa iintsuku ezi-3-7 zokusebenza, iintsuku ezi-3 zomsebenzi zokubuyisela umda kwakhona.
Abanye: Oomatshini beekhompyuter basekhaya, kunqabile ukuba babe noomatshini bekhompyuter abangeniswe elizweni, uninzi lwabasebenzi kufuneka basebenzise okwexeshana ukufumana ishedyuli.
Egqithileyo Iipateni zokubopha ijezi Pullover zamadoda.
Okulandelayo: Zonke iintlobo zeeLadies 'ezinje